3A Ihicha nke Gas, HDS maka Naphtha, Advanced Alumina Clause Catalyst - Gascheme
Shanghai Gascheme Co., Ltd. (SGC), onye na-enye ndi okacha amara na ndi ozo. N'ịdabere na nzụpụta ọrụ aka nke ụlọ ọrụ nyocha anyị, SGC na-etinye onwe ya n'ịzụlite, n'ichepụta na ikesa ihe ndozi na mgbasa ozi maka ụlọ nrụcha mmanụ, kemịkal na kemịkalụ. A na-eji ngwaahịa SGC eme ihe maka mgbanwe, hydrotreating, steam-reforming, sọlfọ-mgbake, hydrogen-production, synthetic gas, wdg.
Ndị na-eme nchọpụta na ndị na-ahụ maka adsorbent na ndị na-anụcha mmanụ, petrochemicals na gas gas refining.
R&D na ihe (Zeolites) na catalysts. R&D na nhazi nhazi mmanụ (hydrotreating / hydrocracking / reforming / isomerization / dehydrogenation) na eke gas refining processing (nkebiahiri / TGT).
Otu ndị ọkachamara nwere ahụmịhe bara ụba na R&D na arụmọrụ bara uru maka ihe ị chọrọ.
052020 / Nọvemba
Ejiri usoro usoro mmeghachi omume (RSM) na-amụ ihe ọmụmụ nitric acid nke mkpofu nke Co Mo nke na-eme ka mmeghachi omume hydrotreating. Ebumnuche nke a ...